That's so good, right?: June 2012
တစ်ကိုယ်တည်း တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ် အဲဒီစိတ်ကြောင့် အချစ်သစ်တွေမွေးဖွားလာခြင်းလား တွေး မိပါတယ်။ ကိုယ်တခြားသူတွေကို အကြံပေးမြဲဖြစ်တဲ့ 'ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအလုပ်၊၀ါသနာတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။ စိတ်ဝင်စားရာ အလုပ်၊ ဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာဆည်းပူးပေးပါ။ မကြာပါဘူး၊ ကိုယ့်စိတ်ဟာ တဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်လာပြီး ကြံ့ခိုင်လာပါလိမ့်မယ်' ဆိုတာက လေတကယ်တမ်းတော့ ကိုယ့်အတွက် ဆေးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အသိခေါက်ခက်အ၀င်နက်လို့ဆိုမလား အထီးကျန်တာကိုကြောက်တဲ့စိတ် ကြောင့် သူနဲ့ ပန်းနုရောင်ဇာတ်လမ်းသစ်တစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်တာအမှန်ပါဗျာ။
ငေးနေတဲ့ ပြတင်းပေါက်ကနေခွာ ဆိုင်ခန်းအနောက်ဖက်ကိုသွား ရေခဲသေတ္တာထဲက Coke တစ်ဘူးလောက်ဆွဲပြီး သံကွင်းလေးကို ဆွဲ ဖွင့်ကာရှိသေး ဆိုင်ရှေ့က တံခါးဘဲလ်သံ မြည်လာတယ်။ သက်ပြင်းခပ်လေးလေးချလိုက်ရင်း မျက်လုံးတွေကို ဟိုသည်လှိမ့်လိုက်မိပါရဲ့။ တိုးရစ်တစ်ယောက် ကျွန်တော့် tattoo ဆိုင်လေးက မိုးသက်မုန်တိုင်းကနေ ဖယ်ခွာနေဖို့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုအဖြစ် ဆုံးဖြတ်လိုက် ဟန်တူတယ်။ အချိန်အားလုံးလိုလို ဖြစ်နေခဲ့တာပဲလေ မိုးခိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နံရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ tattoo poster တွေ၊ စင်ပေါ်မှာထား တဲ့ tattoo design catalogs တွေလှန်ကြည့်မယ်၊ tattoo ထိုးပြီးသွားသူတွေ အမှတ်တရ ရိုက်ပြီးထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကြည့် မယ်၊ ပြီးတော့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ( Q:နာလားဟင်? Q: သန့်စင်ခန်း ခဏသုံးလို့ရမလား? Q: တစ်လက်မပတ်လည်လောက်ပုံဆိုရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲဗျ?) မေးပြီး ကျွန်တော့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးပစ်ကြပါမယ် ပျှမ်းမျှအားဖြင့်ပေါ့။
'အား...အပျိုစင်လေးလို....အု' ကျွန်တော် သီချင်းသံစဉ်နှင့် ဟာသနှောလိုက်ပါတယ်။ သူ့ပါးပြင်တလျှောက်ရဲရဲနီဖြစ်သွားပါရော။ tattoo ထိုးတာကို ဦးဆုံးပြုလုပ်ဖူးတာမဟုတ်ဘဲ တခြားအရာတွေကိုလည်း မစမ်းသပ်မလုပ်ဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုတာ ပြောဆိုနေသလိုပါပဲ။ လည်ချောင်းရှင်းအောင် တစ်ချက်ဟန့်လိုက်ရင်း စကားဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်လမ်းကြောင်းထဲ သူမျောလာမယ်မျှော်လင့် တာပေါ့။ 'အိုကေ ဘယ်ဒီဇိုင်းပုံ မင်းဆွဲမလဲ? ဘာနဲ့နွယ်တဲ့ဟန်ကိုကြိုက်?' ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့ နောက်ဖက်စင်ပေါ်က ဒီဇိုင်း catalog တစ်ခုနှင့် ကောင်တာမှာ လောလောဆယ် ဖွင့်ကြည့်နေတဲ့စာအုပ် သူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်ရင်း 'အစ်ကို့နာမည်ကျော်ကျော်ပါ စကားမစပ်' အပြုံးနှင့် နှုတ်ဆက်စကားပြောလိုက်တယ်။ လှမ်းလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ကို သူပြန်လည်ဆွဲကိုင်ရင်း အပြုံးတစ်ဝက်နှင့် ပြန်ပြုံးပြတယ် သူက 'သုတ' တဲ့။ သူ့မျက်လုံးတွေ ကျွန်တော့်လက်ဖျံနှင့် လက်မောင်းတွေကို ငမ်းရင်း ကျွန်တော့်လက်ကိုင်ဆွဲထားတာကို သူပိုမိုဖျစ် ည္ဓစ်ပါ၏။ '၀ိုး....အစ်ကို့ tattoo တွေက သောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ'
ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကိုဖယ် ချောဆီရွှဲစိုနေအောင်သုတ်လိမ်းထားတဲ့ စွပ်ထားသောငပဲကြီးကို အစားသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ခရေ တွင်းဟာ ပူနွေးနေပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို ကြပ်နေအောင် ဖျစ်ညှစ်ထားတာများ တရားခံကိုလွတ်သွားမှာစိုးရိမ်ပြီး လက်ထိပ်ခတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ထိပ်ပိုင်းလေးကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရာက အဆုံးထိဖိသွင်း လိုက်ပါတယ်။
အိုကေ...ကျွန်တော် သေသွားနိုင်တယ်... ပျော်ရွှင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် အခုပဲသေသွားမှာ
သက်ပြင်းမောကိုချရင်း လေပူတွေကိုမှုတ်ထုတ်ကာ အသက်ပုံမှန်ရှူဖို့ ကြိုးစားရင်းပေါ့။ 'သုတ' ကျွန်တော့်အလုပ်စားပွဲပေါ် မျက်နှာအပ်မှောက်လိုက်ပါရဲ့ သူ့ဗိုက်သားပေါ် သုတ်ရည်တွေရွှဲနေအောင် ပန်းထားတာကို စိတ်မဆိုးဘဲ။
'ညီ....အခု relax ဖြစ်သွားပြီလို့ ခံစားရတယ်ဗျ' သူခပ်တိုးတိုးပြောတဲ့စကားသံဟာ ခုံကာဗာ သားရေစနှင့် ထိကပ်ပြီးမှ ထွက်လာသလိုပဲ။ ‘Really relaxed, Really, Really relaxed, Really, Really, Really' 'အိုကေ..သဘောပေါက်ပြီ' ကျွန်တော်စကားကို ကြားဖြတ်ပြော လိုက်တယ်။
'မင်းသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားပြီ။ ဒီတော့ tattoo ထိုးဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီပေါ့အခု' အမေးစကားပြောလိုက်ရင်း သူ့တင်ပါး တစ်ဖက် ကို ရိုက်ခတ်ကစားလိုက်ရော။ အလုပ်ခွင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့အသင့်ပေါ့။ ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာတော့ ရွာသွန်းနေတဲ့မိုးစဲသွားပါပြီ။ လာနေ ကြဖောက်သည်အချို့ဆိုင်ရှေ့မှန်တံခါးကိုလာမခေါက်မှီ ဒီကောင်လေးကိစ္စ အပြီးသတ်ဖို့လိုတယ်။
သုတ အတော်တော့ ၀ါသနာပါသူပဲ။ tattoo တွေကိုကောင်းကောင်းထိုးချင်တာ။ သူလာနေကျပုံစံအဖြစ်အချိန်တစ်ခုကို သတ်မှတ် လို့ရအောင် ကို အကြိမ်များစွာ ကျွန်တော့်ဆီပြန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အခုသူ့ပခုံးတလျှောက် ကနုတ်တွေဆွဲနေပါပြီ။ သူ့ကိုဆေးမှင်ချယ်ခွင့် ပေးတာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းကိုပါ။ ဆိုင်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်များမှာ သူအမြဲလို လိုရောက်လာတတ်တယ်။ အဲဒါမိုးစက်တွေမြေကြီးပေါ် စတင်ခုန်ပေါက်တဲ့အချိန်တိုင်းလိုလိုပေါ့။ ပြီးတော့ သူအမြဲလိုအပ်နေတာက ပထမဆုံး သက်သောင့် သက်သာဖြစ်ဖို့။
Note: ဘာမှန်းမသိစာမရေးချင်ဘဲ ချစ်သူဟောင်းကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေရင်ထဲအုံကျင်းဖွဲ့နေတာကြောင့် အသစ်ရေးလက်စက တန်းလန်းဖြစ်နေရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့အပျင်းပြေစေဖို့အဟောင်းတစ်ပုဒ်ပြန်တင်ပေးပါရစေ။
Posted by Alex Aung at 2:04 PM 1 comment:
ယောက်ျားတယောက်မှာ ကျားလိင်အဂ်ါ သန်မာမှုဖြစ်ဘို့ မစွမ်းနိုင်တာဟာ အမြဲတန်းလို ဖြစ်လာနေတာကို ခေါ်တယ်။ ထိရောက်တဲ့ ဆေးကုသမှု မခံယူရင် လိင်ဆက်ဆံဘို့ရာ ခက်ခဲတာ နဲ့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်လာမယ်။ Massachusetts Male Aging Study on sexual dysfunction (မက်ဆာချူဆက်) ကလုပ်ထားတဲ့ အသက်ကြီး ယောက်ျားတွေမှာ လိင်မှုရေးရာ မစွမ်းနိုင်တာ လေ့လာမှုအရ ယောက်ျားတွေ အသက် ၄ဝ ကျော် လာရင် စဖြစ်တတ်တယ်။ အမေရိကားမှာ အဲလိုလူပေါင်း ၁၈-၃ဝ သန်း ရှိနေတယ်။
• ED vs. Poor Libid တကယ်ဖြစ်တာ နဲ့ စိတ်အားနည်းတာ
Erectile Dysfunction ဆိုတာ အမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။ လိင်စိတ်နည်းနေတာကို Poor Libido ခေါ်တယ်။ Ejaculation problems ဆိုတာက သုက်ထွက်ဘို့ ခက်တာကို ခေါ်တယ်။ တကယ်တန်း ပန်းမလန်းနိုင်မှသာ ED ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် ED ဖြစ်နေပေမဲ့ လိင်စိတ်က ပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ “စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ” ဆိုတာ ဒါမှ အစစ်ဘဲ။
• Symptoms of ED လက္ခဏာတွေဆိုတာ
ခဏလေးသာ လိင်အင်္ဂါသန်မာမှုရတာ၊ သန်းမာမှုက လုံလောက်မှု မရှိတာ၊ လုံးဝကို သန်မာမှုဖြစ်မလာနိုင်တာတွေ။ တိကျအောင်ပြောရရင် လိင်ဆက်ဆံဘို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ လိင်အင်္ဂါသန်မာမှု ၇၅% မဖြစ်နိုင်သူကိုမှသာ ရောဂါသည်လို့ သတ်မှတ်တယ်။
အသက်ကြီးလာလေလေ ဖြစ်နိုင်ခြေ များလေ။ Massachusetts Male Aging Study (မက်ဆာချူဆက်) လေလာမှု အဆိုအရ အသက် ၄ဝ ကျော် သူတွေထဲမှာ ၄ဝ% နဲ့ ၇ဝ ကျော်သူတွေထဲမှာ ၇ဝ% ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်ကြီးတိုင်း လိင်အရေးနဲ့ ကင်းဝေးသွားတယ်ဆိုတာတော့ မမှန်ပါ။ ဖြစ်တာကိုလဲ ကုသလို့ရတယ်။
• The Mechanics of ED လိင်အင်္ဂါသန်မာမှု ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ
ကျား-လိင်တံထဲမှာရှိတဲ့ Corpora cavernosa နှစ်ခုထဲကို သွေးတွေပိုပြီး စီးလျှောက်လာလို့ သန်မာလာစေတယ်။ တင်းလာမယ်။ ကားလာမယ်။ ဘူဘောင်းထဲ ရေဖြည့်ပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။ ဒီလိုဖြစ်စေအာင် ဦးနှောက် နဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကနေ အစပျိုးပေးတယ်။ Impulses သတင်းပို့ချက်တွေ ရလို့ ဖြစ်စေတာယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းမှာ တခုခု ဖြစ်နေရင် ဒီလိုဖြစ်လာဘို့ ခက်စေမယ်။
• Causes of ED ဘာလို့ဖြစ်ရသလဲ
- Chronic Disease နာတာရှည် ရောဂါတွေထဲမှာ Diabetes ဆီးချိုရောဂါက ထိပ်ကရှိတယ်။ ဆီးချိုသမား ၂ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဖြစ်တယ်။ စိတ်သိပ်ပူစရာတော့ မလိုပါ။ သွေးထဲက သကြားဓါတ်ကို ထိန်းနိုင်ရင် အများကြီးကောင်းစေမယ်။ နောက်နာတာရှည် ရောဂါတွေကတော့ Cardiovascular disease နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ၊ Atherosclerosis သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ Kidney disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ Multiple sclerosis (မာလ်တီပယ်-စကယ်လရိုးဆစ်) ရောဂါတွေ ဖြစ်တယ်။
- Lifestyle လူနေမှုပုံစံ မကျတာကိုလဲ အပြစ်ဖို့နိုင်တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အရက်စွဲတာ၊ ဆေးစွဲတာတွေကနေ သွေးကြောတွေကို ထိခိုက်စေတာမို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် များလွန်းသူတွေ၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု နည်းသူတွေမှာလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
- Surgery ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံရသူတွေမှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ လာဖြစ်တယ်။ Prostate cancer ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ Bladder cancer ဆီးအိမ်ကင်ဆာ နဲ့ BPH ဆီးကျိတ်ကြီးရောဂါတွေကို ခွဲစိတ်တာတွေကနေ လိင်အင်္ဂါ အနားက သွေးကြောတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်မိလို့ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အာရုံကြော ထိခိုက်တယ်ဆိုတာ ရာသက်ပန် ဖြစ်သွားတာမျိုး။ ကျန်တာက ယာယီသသာ ဖြစ်စေတယ်။
- Medication ဆေးဝါးတချို့ကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Blood pressure drugs သွေးတိုးကျဆေး၊ Antidepressants စိတ်ကျရောဂါဆေး နဲ့ Tranquilizers စိတ်ငြိမ်ဆေးဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
- Psychological စိတ်ပိုင်းကုသဘို့ လိုအပ်နေသူတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်တာက ရုပ်ပိုင်းကြောင့်များပြီး မကြီးသေးဘဲဖြစ်တာက စိတ်ပိုင်းနဲ့ ဆိုင်တတ်တယ်။ ကြီးကြီး-ငယ်ငယ် ခြုံလိုက်ရင် စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာ ၁ဝ-၂ဝ% ရှိတယ်။ Stress စိတ်ဖိစီးမှု၊ Depression စိတ်ဓါတ်ကျ၊ Poor self-esteem ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမရသူ၊ Performance anxiety စိုးရိမ်စိတ်ကဲခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာ များတယ်။ စိတ်ရော ရုပ်ပါ တွဲလို့ဖြစ်ရတာလဲ ရှိတယ်။
- Bicycling စက်ဘီး စီးတာကိုလဲ အပြစ်ဖို့နိုင်တယ်။ သုတေသနလုပ်တော့ စက်ဘီးစီးသူတွေက မစီးသူတွေထက် ဖြစ်သူဦးရေ ပိုများနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။ စက်ဘီး ထိုင်ခုံပုံစံကို အပြစ်ပြောနိုင်တယ်။ Perineum တင်ပါးအတွင်းနေရာကို ဘယ်လောက်ဖိနေသလဲ။ စအိုနဲ့ ကပ်ပယ်အိတ် ကြားနေရာမှာ ဒီရောဂါအတွက် အရေးပါတဲ့ သွေးကြောတွေ၊ အာရုံကြောတွေ များတယ်။
• Diagnosing ED ရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ် စစ်ဆေးနည်းများ
• Physical Exam အပြင်ပန်းဆေးစစ်ခြင်း လုပ်မယ်။ မေးခွန်းတွေ မေးမယ်။ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်၊ ခံစားနေရတာ၊ အချိန်ကာလ၊ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ။ ပြီးရင် စစ်ဆေးမယ်။
• Lab Tests ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးနည်းတွေလုပ်မယ်။ Testosterone levels (တက်စတိုစတီရုံး) ကျား-ဟော်မုန်း စစ်မယ်။ Blood cell counts သွေးစစ်တာ၊ Cholesterol levels (ကိုလက်စထော) နဲ့ Liver function tests အသဲလုပ်ငန်းတွေ စစ်တာလုပ်မယ်။
• A Sign of Heart Disease နှလုံးရောဂါရှိနေတဲ့ လက္ခဏာလား။ ၂ဝ၁ဝ စစ်တမ်းတခုအရ ED ရှိနေသူတွေဟာ Heart attack, Stroke နှလုံးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။
• Treating ED ဘယ်လိုကုသမလဲ။
- Lifestyle Changes လူနေမှုပုံစံပြုပြင်ပါ။ Smoking ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ Losing weight ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ပါ၊ Exercising လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ သောက်နေရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့်ဆိုတာ သံသယရှိရင် ဆေးအဆ လျှော့ပေးလိမ့်မယ်။
- Oral Medications သောက်ဆေးတွေ။ Viagra (ဗိုင်ယာဂရာ) ကြားဘူးမှာပါ။ အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ ဒီဆေးတမျိုးထဲမက ရှိပါတယ်။
Cialis, Levitra, Staxyn နဲ့ Stendra တွေပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကနေ လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ သွေးပိုစီးလျှောက်စေလို့ သန်မာစေတယ်။ လိုအပ်ချိန် မတိုင်ခင် မိနစ် ၃ဝ ကနေ ၆ဝ ကြိုသောက်ရတယ်။ တနေ့မှာ တခါသာ သောက်သင့်တယ်။ Cialis ဆေးကိုတော့ ၃၆ နာရီကြိုတာလဲ သက်ရောက်တယ်။ Staxyn ဆေးက ငုံတာနဲ့ ပျော်သွားတယ်။
- Injections ထိုးဆေးတွေ။ စားဆေးထက် ပိုအားကိုးချင်သူတွေက လိင်အင်္ဂါထဲ ဆေးထိုးပေးနိုင်တယ်။ သတိထားဘို့က လိင်အင်္ဂါ ကြီးချေချင်လို့ ထိုးတာနဲ့ မတူပါ။ ဒီလို ကြီးချင်လို့ထိုးတာက ဆိုးကျိုးရစေတာ များတယ်။ Pellet ခေါ်ဆေးတောင့်ကို Urethra ဆီးသွားလမ်းထဲ ထည့်တာလဲ လုပ်နိုင်သေးတယ်။ ၁ဝ မိနစ်ကြိုတာနဲ့ ရတယ်။
- Vacuum Devices လေဟာနယ်စုပ် ကရိယာ။ Pumps လို့လဲခေါ်တယ်။ ဆေးမပါဘူး။ လိင်တံကို (ဆလင်ဒါ) ထဲ သွင်းထားပြီး အထဲကလေကို စုပ်ထုတ်တယ်။ လေဟာနယ် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဆလင်ဒါ ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လိင်တံထဲက သွေးကြောတွေထဲကို သွေးတွေပိုဝင်လာစေမယ်။ လိင်အင်္ဂါ သန်မာလာမယ်။ အဲဒီအချိန်မယ် အရင်မှာ သားရေကွင်းလေးတခုနဲ့ စီးနှောင်ပေးထားရတယ်။
- Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်း။ သွေးကြောကျဉ်း-ပိတ်တာကြောင့် ဖြစ်ရတာဆိုရင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အသက် သိပ်မကြီးသေးသူတွေအတွက် ခွဲစိတ်တာ ကောင်းတယ်။ အသက်ကြီးပြီး သွေးကြောမာ-ကျဉ်းနေသူတွေအတွက် မကောင်းပါ။
- Implants (အင်ပလန့်) တွေ – တခြားနည်းတွေနဲ့ အလုပ်မဖြစ်သူတွေအတွက် Penile implant အပိုပစ္စည်းလေး ထည့်ပေးနည်း သုံးနိုင်တယ်။ အဲဒါလေးမှာ Inflatable implant လေသွင်းလို့ရတဲ့ Cylinders ဆလင်ဒါလေး ၂ ခုပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီး ထည့်ထား ပေးရတယ်။ လိုအပ်ချိန်မှာ ဆလင်ဒါ လေးတွေထဲကို အရည်တွေသွင်းပေးရုံဘဲ။ Malleable implant ဆိုတာကိုလဲ အစားထိုး သုံးနိုင်တယ်။
- Psychotherapy စိတ်ပညာနဲ့ ကုသနည်း။ အထူးတတ်ကျွမ်းတဲ့ စိတ်ဆရာဝန်ကနေ ယောက်ျားရော မိန်းမကိုပါ စိတ်ကုသနည်း လုပ်ပေးမယ်။ Performance anxiety စိုးရိမ်စိတ် လျှော့နည်းစေအောင်နဲ့ Intimacy တယောက်နဲ့တယောက် ပိုပိုနီးစပ်စေအောင် ကူညီမယ်။ Vacuum devices နဲ့ Implants တွေ အသုံးပုံသုံးနည်းကိုလဲ သင်ပေးမယ်။
- Alternative Therapies တခြားနည်းတွေ။ Asian ginseng နဲ့ Ginkgo biloba တွေကိုသုံးကြတယ်။ သုတေသန သိပ်မစုံသေးတာကို သတိပြုပါ။ DHEA supplement ဆိုတာကိုလဲ သုံးကြတယ်။ ဒါလဲ အထောက်အားကောင်း မပြည့်စုံသေးပါ။
- Buyer Beware ကြော်ညာတွေကို သတိထားပါ။ Dietary supplements ဆိုပြီး (အင်တာနက်) ကနေ ကြော်ညာတာတွေ တဒါဇင်မက ရှိတယ်။ FDA က သတိပေးချက် ထုတ်ထားတာကို ဖတ်ပါ။ တချို့ဆေးတွေထဲမှာ ရေးမထားပေမဲ့ ပါနေတာက Viagra ဖြစ်နေတာလဲ ရှိတယ်။
• Discussing ED with your partner ဇနီး (အဖေါ်) နဲ့ နားလည်မှုယူပါ။ အဲလို လိင်အရေးမှာ အဆင်မပြေတာဟာ တကယ်ဘဲ စိတ်သောကဖြစ်စရာ မှန်ပါတယ်။ စိတ်တိုမယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျမယ်။ အဖေါ်ကလဲ တမျိုးတမည် တွေးမယ်။ ကြံစည်မယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုပြီး နားလည်မှုယူတာ ကောင်းတယ်။
ED Medicines ကျား-လိင်အင်္ဂါ သန်မာခြင်းကို သက်ရောက်စေသောဆေးများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/ed-medicines.html
Erectile Dysfunction (ED) ပန်းသေ-ပန်းညှိုး http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/erectile-dysfunction-ed.html
Erectile Dysfunction Risk ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်တာနဲ့ သောက်ဆေးတွေ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/03/erectile-dysfunction-risk.html
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ – ပန်းသေ-ပန်းညှိုး (၂)
Posted by Alex Aung at 5:11 PM No comments:
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ အေးငြိမ်းတိတ်ဆိတ်သော ညနေခင်းဆိုပေမဲ့ ၇နာရီကျော်ပြီဆိုတော့ နည်းနည်းမှောင်စပြုနေပြီ။ မော်တော်ကားတွေက တော့ သူတို့သွားနေတဲ့ ခရီးလမ်းအတိုင်း ဥဒဟိုသွားလာနေကြပါတယ်။ နှစ်မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ လေဟာပြင်ကြီးက တစ်ဆင့်မြင်ရတဲ့ လမင်းကြီးဆီက လရောင်အချို့ကတော့ ဖြာဆင်းကျနေရဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်။ လရောင်ကို လှုံရင် အမျိုးသမီးတွေကို လှပစေတယ်ဆိုတဲ့ မနုစာရီဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင်၊ လရောင်ရဲ့ဆွဲငှင်အားဟာ ကမ္ဘာပေါ်က ဒီရေလှိုင်းတွေကို အတက်အကျဖြစ်အောင် ဆွဲငှင်နိုင်တယ် ဆိုတာတွေထက် ကားကိုအေးအေးသက်သာမောင်းလာရင်း အကြောင်းမဲ့ လရောင်ဟာ ကျွန်တော့်မသိစိတ်ထဲက လိင်စိတ်ဆန္ဒကို ထကြွစေသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကြားဖူးနေကျနေရာတစ်ခုစီကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကြောက်ကြောက်နှင့်ပဲ ကားရပ်နေရာသေးသေးလေးထဲ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ကားအတွင်းမီးကို မှိတ်လိုက်ပြီး အမှောင်ထု ကဲရာဘက်ကို မျက်လုံးအကြည့်တွေကို စူးရှလိုက်မိပါရဲ့။ အရာအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်လေ။ ဒီရပ်နားရာနေရာမှာ အခြားသော ကားလေးစင်းက ရပ်နှင့်နေကြပါပြီ။ ကားတွေကလည်း သူတို့အကြောင်းပြချက်နှင့် သူတို့ ရပ်နေကြတာဖြစ်မှာပေါ့နော်။
ကျွန်တော် နောက်ဘာဆက်လုပ်ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုတာ အခုထိမသေချာချင်သေးဘူးဗျ။ ဘဲတစ်ပွေ သူ့ကားထဲကဆင်းပြီး လမ်းကြောင်း လေးတစ်ခုရှိရာဆီလမ်းလျှောက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်သူ့နောက်ကို လိုက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားပြီး ချီတုံချတုံနှင့် ကားပေါ်မှာငြိမ်နေမိစဉ်မှာပဲ အဲဒီလူပြန်လာပြီး ကားပေါ်တက်မောင်းထွက်သွားပါရော။ လျှောက်လှမ်းကြည့်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး သော့ခတ်ကာ စထွက်တော့ ကားတစ်စီးစက်နှိုးထားတာ သတိပြုမိပေမဲ့ ကားအတွင်းပိုင်းကို မမြင်ရပါဘူးလေ။ နည်းနည်းဝေးဝေးလျှောက်လာတော့ လူရိပ်နှစ်ခု ထပ်ရက်သဘောမြင်ရတယ်။ သေချာပေါက်ပြောနိုင်တာက တစ် ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး အလုပ်များနေတယ်ဆိုတာကိုလေ။ကျွန်တော် လျှောက်လှမ်းလာတာကို သူတို့သတိပြုကြားမိသွားချိန် လန့်မပြေးသွားအောင် ကျွန်တော့်မှာ အကြောဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သယောင်ယောင်၊ ခုန်ဆွဆွလုပ် သလိုလိုပြေရင်း လှုပ်ရှားပြလိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကတော့ 'ဟေး....ဘော်ဒါတွေ ဆက်လုပ်လေဗျ' လို့ပြောချင်စိတ် ဖြစ်မိသေး။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်ကာ လမ်းသွယ်လေးတစ်လျှောက်သွားပြီးမှ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိပါရဲ့။ မြင်လိုက်ရတာ လူ နှစ်ယောက်က သူတို့ကားရှိရာပြန်သွား၊ ကားပေါ်တက်ကာ မောင်းထွက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဟိုသည် လျှောက်လှမ်းကြည့် ပြီးကာမှ မထူးခြားလာတာနဲ့ ကျွန်တော့် ကားဆီကိုပဲ ပြန်လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။
ကားရပ်တဲ့နေရာမှာ နှစ်စင်းပဲကျန်တော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကားရယ် ကားစက်နှိုးထားတဲ့ တစ်စင်းသောကားရယ်ပေါ့။ ကားက ခပ်ကြီး ကြီးနဲ့ အထဲကိုဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတော့ သူ့နားကဖြတ်လျှောက်အသွားမှာ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းခြင်းလျှောက်မိတယ် ဘာ လုပ်ရမလဲ၊ မသိတာလည်း ပါတာပေါ့နော်။ ကားဘရိတ်မီးတစ်ချက်လက်သွားသေးတယ်။ ဒါဘာကို အချက်ပြမှန်း ကျွန်တော်မှမသိတာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကားပေါ်ပြန်တက်ထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်ရော။ ကျွန်တော့်ကားဘရိတ်မီးကိုလည်း လက်သွားအောင်လုပ်လိုက် သေးပေမဲ့ ဘာမှမထူးခြားသေးပါဘူး။ဘာမှမထူးခြားတာ ဒုက္ခဘဲ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်တွေ သောက်ရမ်းသောင်းကျန်းနေပြီ။ အိမ်ပြန်ရ တော့မယ်ထင်တယ် သောက်ရူးကျနေတာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ငြိမ်မိနေဆဲခဏ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကားထဲကထွက်ပြီး လမ်း လျှောက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ကားပေါ်က သွက်သွက်ဆင်းကာ လိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။
သူ တော်တော်လှမ်းလှမ်းကို လျှောက်သွားကာ သစ်ပင်ခပ်ကြီးကြီးရဲ့ဘေးမှာ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းသူ ဘောင်းဘီထဲက ထုတ်ပြီးကိုင်ထားတာဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ရပ်တန့်လိုက်ကာ ကိုယ့်ဘောင်းဘီကို ဇစ်ဖွင့်လိုက်ပြီး သူ့ဆီလှမ်းသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ သူ ကျွန်တော့်အနားကပ်လာပြီး သူ့ငပဲကိုကိုင်ဖို့ အထာပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်နေတာက အသက်ခပ်ကြီးကြီး ၀၀ငနဲတစ်ပွေလား လို့ပါ။ အခုတော့ တော်တော်ကောင်းတဲ့ အ၀တ်အစားတွေဝတ်ဆင်ထားသလို၊ မျက်မှန်အကောင်းစားနှင့် အသက်သုံးဆယ်လောက် ရှိမယ့် လူထွားတစ်ယောက်ပဲဗျ။ ဘော်ဒီနှင့်လိုက်တဲ့ ခပ်တုတ်တုတ်ငပဲကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားဘူးဗျ။ သူ့လက်နုနုညံ့ ညံ့က ကျွန်တော့်ငပဲကို ပြန်ကိုင်လိာပါတယ်။ ခဏနေက တော်တော်ထန်နေတဲ့ငပဲဟာ လက်တွေ့လည်းကြုံရော ပျော့နေသေး။ အ မှောင်ကဲနေသောနေရာမှာ ဒီဘဲရဲ့အကိုင်အတွယ်ကြောင့် ပြန်ပြီးမာတောင်လာပါတယ် သိပ်မကြာပါဘူး။
သူ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ စိုစွတ်ပြီး ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အာခံတွင်းထဲ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲဝင်သွားရတဲ့ဖီလင်က အတော့်ကို တသိမ့်သိမ့်ခံစားရပါတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်း ကားလမ်းမပေါ်က ကားတွေဖြတ်သန်းမောင်း နှင်သွားလာနေတာကြောင့် မီးရောင်တစ်ချက်တစ်ချက် ရောက်လာပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ငပဲကို သူစိမ်းရဲ့အာခံတွင်းထဲထည့်ထား တာမပျက်ပါဘူး။ လေနုအေးတစ်ချို့တိုက်ခတ်တာကြောင့် နည်းနည်းအေးပေမဲ့ ကျွန်တော့်သွေးတွေက ဆူပွက်နေပါပြီ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အန္တရာယ်ရှိသောလုပ်ရပ် သို့မဟုတ် လက်တည့်စမ်းသောလုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ခံစားနေရပေမယ့် သူ့အတွက် တော့ သိပ်မထူးဆန်းသလိုပါပဲလား။ သူ -ီးကိုပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး ကစားနေတာများ တကယ့် expert ။ တဖြည်းဖြည်း ဒီဂရီမြင့်သထက်မြင့် အောင် သူစွမ်းနိုင်တယ်။ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို သူမျိချတယ်၊ rhythm ကျကျလှုပ်ရှားတယ်၊ မြန်လိုက်နှေးလိုက် အရှိန်နှုန်းညှိတာတွေနှင့် အဆုံးစွန်ကို နီးသထက်နီးအောင်မောင်းတင်ပါရဲ့။ သူ့လက်အချို့ကတော့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ် သေးတယ်။ သူ့ပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်မှုတွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုပဲ ကျွန်တော့်ကို တုန်တုန်သွားစေသား။ သူ့ပါးစပ်ထဲရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို ပိုပိုမတ်စေတာတော့ အမှန်လို့ပြောရမယ်။
သစ်ပင်ခပ်အုပ်အုပ်တွေရှိတဲ့ တောတန်းလေးတလျှောက်ဟာ တိတ်ဆိတ်နေတာများ မလှမ်းမကမ်းက ဖြတ်ဖြတ်သွားတဲ့ ကားမောင်းသံ အချို့၊ ငပဲကိုစုပ်မှုတ်နေတဲ့ ငနဲရဲ့နှုတ်ဖျားက တပြွတ်ပြွတ်ထွက်နေသောအသံများ၊ ကျေနပ်မိန့်မူးနေတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းက ညည်းညူ သံလေးတွေသာ ကြားနေရတယ်ပေါ့။ သူ့အနေနဲ့ ကြွားနိုင်တာက သူဟာ ကျွန်တော့်အထာကိုသိသွားပြီး အရှိန်ပိုပိုမြှင့်ပေးနိုင်လိုက် တယ်ဆိုတာ။
'အာ.....အ' ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ညည်းတွားမိရပြီ။ 'အာ....ပြီး..ပြီးချင်လာသလိုပဲ...အာ'
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အမှောင်ထုထဲဝယ် ကျွန်တော့်အသံသည်သာ ကြားနေမယ့်အထာ။ သူ့စုတ်မှုတ်နေတဲ့ အရှိန်နှင့်အတူ ကျွန်တော့် တင်ပါးကိုကျစ် အားပြုကာ သူ့ပါးစပ်ထဲ ကျွန်တော်ကလည်း အထုတ်အသွင်းပြုပါတယ်။ သူကလည်း ပိုမိုစုပ်မျိုသလို ကျွန်တော်ကလည်း အဆက်မပြတ် ဆောင့်-ိုးတော့တာပဲ။ သူ့လည်မျိုထဲထိ ဖိဖိသွင်းပြီး -ိုးတာကို သူဆွဲမထုတ်ဘဲ ကျွန်တော့်သဘောကျလုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်ထဲအ၀င်အထွက်ပြုနေတဲ့ ကိုယ့်ငပဲကို ငုံ့ကြည့်ပြန်တော့ အ၀င်အထွက်ခပ်မြန်မြန်နှင့် ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်နေတာကို ၀ိုးတ၀ါးမြင်ရ ရော။ ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံဟာ ပိုပိုကျယ်လာပြီး ထိန်းချုပ်ထားသမျှ တစ်ချက်လွှတ်ကာ အော်လိုက်ရင်း သူ့လည်မျိုထဲကို သုတ်ရည်တွေ ဒလဟောသွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တာကြောင့် လက်ကျန်ကိုအပြင်မှာ ထပ်ပန်းထုတ်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံး ကျေနပ်မှုနှင့် တဆတ်ဆတ်တုန်ခါမိပါရဲ့။ သူ ကျွန်တော့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို သူ့ဘောင်းဘီအိတ် ထဲက အ၀တ်တစ်မျိုးဆွဲထုတ်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ အရာအားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားပြန်တော့ ဘောင်းဘီနှစ်ခုရဲ့ ဇစ်ဆွဲပိတ် သံရယ်၊ အမှောင်ထဲမှာ လျှောက်လှမ်းသွားတဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ခြေသံတွေရယ်ကလွဲလို့ပေါ့။
ကျွန်တော့်ကားဆီပြန်ရောက်တော့ ခပ်ဆဆအတွေးနှင့်အတူ မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရူးသွပ်ခဲ့သလဲ? ဒီလောက် အန္တရာယ် များတဲ့ လတ်တလောအခြေအနေတစ်ခုထဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွပ်သွင်းဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာတွေကိုဆက်တွေးမိပါရော။ ကျွန်တော်သိတယ် ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါ လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ။ အနည်းဆုံးတော့....နောက်တစ်နေ့ ညနေခင်းအထိလေ..။
Alex Aung (10 June 2012 - 10:30 pm)
Posted by Alex Aung at 10:03 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 9:32 PM No comments:
ဒီတော့လည်း စားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုထိုင် ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်က massage service တစ်ခုလောက်ကိုရှာဖွေမိ ပါတယ်။ အံ့သြစရာ, ကျွန်တော့်အိမ်နှင့် တစ်မိုင်ပတ်လည်ဝန်းကျင်မှာ (၃)ခုလောက်ရှိမယ်။ ကျွန်တော်ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်ကာ ပထမ ဆုံးတစ်ခုကို ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ ချိုသာတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သံနှင့်အတူ မြို့ရဲ့ပြင်ပကိုရောက်နေကြောင်း နောက် ရက်သတ္တပတ် (၂)ပါတ် လောက်ကြာမှ ပြန်ရောက်မယ့်အကြောင်း voice message ကိုကြားရသေးတာပေါ့။
ကျွန်တော် တံခါးမကြီးဆီပြန်ဖို့ ခြေစလှမ်းတော့ Andy က Ben လည်တိုင်မှာ သူ့လက်တစ်ဖက်ကို သိုင်းဖက်ထားရင်း 'ကိုယ်တို့ဆီ မင်းအနှိပ်ခံချင်တဲ့အခါ ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ကွာ'တဲ့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းငြိမ့်ပြသဘောတူပြီး ပြန်လာခဲ့ရော။
Phoe Galon – ဆရာခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်တို့ MDY မှာ ၁၀နှစ်အတွင်း homosex တွေများလာပါသည်။ ဆရာပြောသလို ခွင့်ပြုလိုက်ဖို.ဒီနိုင်ငံ​နှင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။အဖော်သုံးဖို.ကြော်ငြာဘုတ်တွေမှာ ၊ CSW(commercial sex worker)တွေကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ပြီး ကျန်းမာရေး ပညာပေးတာတွေလုပ်တော့ “ဟောရင်းသာပြန်လွန်တော်မူသွားတယ် ပရိတ်သတ်က ဒုံရင်း” ပါပဲ။ သူတို့ (CSW)တွေတောင် မလွယ်တာ​ ဆရာ့ရဲ့။ သူတို့ဆိုရင် ဘယ်လိုမှတောင် ပြောရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ လိင်ကူးဆက်ရောဂါ(STD)တွေ ၊ HIVဆေး သောက်ဖို.ပြောရမှာတွေ၊ သွေးစစ်လို့ positive ဆိုတာကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတွေ၊ ရိုးရိုး ဆရာဝန်တွေက ဆေးတွေ ရမ်းပေးလို့ ဆေးမတိုးေ​တာ့ရင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က အခြောက် ဆိုတာနဲ့ HIV ရောဂါသည် ဘယ်ဟာကိုပိုနှာခေါင်းရှုံ့မ​လဲ။ MDY မှာ ည ၉ နာရီကျော်လောက် ကျုံးဘေးမှာ တစ်ယောက်တည်း ဆိုင်ကယ်စီးသွားရင် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ MDY က ကိုကိုကာလသားတွေ သိပါတယ်။ ဆရာ စံဇာဏီဘိုရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်​ထဲမှာ ရန်ကုန်က ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူဌေး အသိုင်းအဝန်းမှာတောင် ရှိတယ်ဆိုတာဖတ်ဖူးပါတယ်။ သူတို့ကိုခွင့်ပြုပြီးတော့ သူတို့အတွက် ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ။
Atta Kyaw: In my view, the majority of Thai people are very tolerant of anything, and hence they do not see it asa“problem,” but as an “unavoidable nature.” I believe their development is far ahead of us just because of their great tolerance towards contrary points of view. On the other hand, we, Shwes, are prone to kick upatremendous fuss about EVERYTHING !!!
Win Kyu - ဆရာရေ.ဒီမှာ(US).ခုခေတ်စားေ​နတယ် ခေါ်မလား၊ တလောကဖတ်လိုက်ရတာက မွေးလာတဲ့ကလေးရဲ့ sex ကို မိဘနဲ့မွေးပေးတဲ့ဆရာဝန် ဆရာမကလွှဲရင် မသိအောင် လျှို့ဝှက်ထားတယ်ဆိုဘဲ။ ကလေးသိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်မှ သူ့စိတ်ကြိုက် ရွေးစေမဲ့ သဘောပေါ့။ ကျမဖြင့်နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဆရာ့သဘောထားလေး သိပါရစေရှင့်။
စာကြွင်း။ ။ ဖတ်ပြီးသဘောကျလို့ပြန်လည်ဝေငှခြင်းသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မူရင်းပို့စ်ကို ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် http://atkbooks.wordpress.com/2011/08/16/on-homosexuality/ မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ။
Posted by Alex Aung at 7:44 PM No comments: